Real Madrid oo weyn doonta AFAR ka mid ah xidigaheeda muhiimka ah kulanka caawa ee Copa del Rey – Gool FM
“Ma jiro ciyaaryahan ka weyn Manchester United” – Tababare Rangnick oo fariin u diray Ronaldo
Van Dijk oo balan qaad u sameeyay taageerayaasha kaddib markii Liverpool ay gaartay finalka Carabao Cup
Muxuu Jordi Alba ka yiri guuldarradii xalay kooxdiisa Barcelona kasoo gaartay Athletic Bilbao?
Klopp oo ka hadlay guushii ay Liverpool ka gaartay Arsenal… (Muxuuse ka yiri Diogo Jota?)
Xavi oo qirasho geesinimo leh sameeyay kaddib markii Barcelona laga cirib tiray tartanka Copa del Rey
Arteta oo sharaxay sababtii ay Arsenal guuldarrada kala kulantay Liverpool kulankii xalay ee tartanka Carabao Cup
Athletic Bilbao oo u gudubtay wareega siddeeda ee Copa del Rey kaddib markii ay ka adkaatay kooxda Barcelona… +SAWIRRO
Liverpool oo balan kaga sameystay Chelsea finalka koobka Carabao Cup kaddib markii ay guul ka gaartay Arsenal… +SAWIRRO
Real Madrid oo iska xaadirisay wareega siddeeda ee Copa del Rey kaddib markii ay guul soo labasho ah ka gaartay kooxda Elche… +SAWIRRO
Real Madrid oo weyn doonta AFAR ka mid ah xidigaheeda muhiimka ah kulanka caawa ee Copa del Rey
Dajiye December 6, 2018
(Real Madrid) 06 Dis 2018. Santiago Solari ayaa sheegay inay ka maqnaan doonaan dhowr ciyaaryahan ee muhim ah kulanka ay caawa kula ciyaari doonaan kooxda Melilla Copa del Rey.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu xaqiijiyay in Gareth Bale, Toni Kroos, Casemiro iyo Nacho Fernandez ay dhamaantood seegi doonaan kulanka caawa ay kula ciyaari doonaan kooxda Melilla garoonka Santiago Bernabéu.
Gareth Bale iyo Toni Kroos ayaa kulankan ku seegaya sababa la xiriira inaysan isbuucan ka qeyb qaadan tababarka kooxda, halka Nacho Fernandez iyo Casemiro ay qabaan dhaawacyo kala duwan.
Waxaa la filayaa in ciyaartoy dhowr ah ee daqiiqado badan kasoo qeyb qaatay kulamadii lasoo dhaafay ay kulankan kasoo muuqan doonaan sida Marco Asensio Isco, Mariano Díaz iyo laacibka reer Brazil ee Vinícius Jr.
Saddexda ciyaaryahan ee Toni Kroos, Casemiro iyo Nacho Fernandez ayaa seegay kulankii ugu dambeeyey ee ay la ciyaareen Valencia, marka laga reebo Gareth Bale oo ciyaaray 90-ka daqiiqo ka hor inta uusan xanuun dareemin.
Si kastaba kooxda Real Madrid ayaa haatan qarka u saaran inay u gudubto wareega xiga ee 16-ka ee Copa del Rey, kadib markii ay lugtii hore ay ku soo xasuuqday kooxda Melilla 4-0.
Arsenal oo weli guul kaga gaari la’ United Old Trafford kaddib Markii….+SAWIRRO
Maurizio Sarri oo si caro leh kaga hadlay guuldaradii xalay kasoo gaartay kooxda Wolves